Dagaalo Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Calamada.com
Dagaalo Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
calamada October 14, 2016 1 min read
Ciidamada mujaahidinta wilaayada Sh.hoose oo sare uqaaday howlgalada ka dhanka ah cadowga alle ee soo duulay ayaa xalay howlgalo saf ah kasameeyay xarumaha cadowga degmada Qoryooley iyo degmada Afgooye.
Xalay fiidki hore weerarka koowaad waxa lagu beegsaday fariisinka kuffaarta afrikaanka iyo maleeshiyaadka kooxda ridada ay kuleeyihiin degmada Qoryooley, dhawaqa rasaasta iyo hubka cul culus ee dagaalka la isku dhaafsanayay ayaa laga maqlaayay xaafadaha Qoryooley iyo deegaanada kudhow dhow.
Sarkaal kamid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa idaacada andalus usheegay in xalay goor dambe oo saqdii dhexe ah in ciidamada ay kasoo laabteen degmadaasi, lama hayo qasaaraha kadhashay dagaalki lagu qaaday kufaarta iyo murtadiinta kusugan Qoryooley.
Geesta kale isla xalay ciidamada mujaahidinta saqdii dhexe waxay dagaal qorsheysan ku qaadeen fariisimo maleeshiyaadka kooxda ridada ay ku leeyihiin deegaanka Buulo-foolyo ee duleedka degmada Afgooye.
Dagaalka oo xili saqdhexe ah bilowday ayaa lagu soo waramaya in maleeshiyaadka ay ka firxadeen saldhiyadoodi iyadoo lasoo warinaayo in uu jiro qasaare dhimasho iyo mid dhaawac.
Howlgalada ka dhanka ah cadowga nagu soo duulay ayaa kusii xoogeysanaya wilaayada Sh.hoose goobaha cadowga ay duulanka kaga sugan yihiin.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Radio Andalus 13-01-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 13-01-1438 Hijri.